I-Porn Porn iyathintela ubuchopho-iSiseko soMvuzo
Ikhaya Basics Brain I-Porn Porn iyathinta ubuchopho
Ukuba kuphela sizalwe sinencwadana yemiyalelo kwinto esenza siphawule! Kuya kunceda ngenene ukuba nesahluko malunga nokuba i-intanethi ichaphazela njani ingqondo. Iindaba ezimnandi kukuba, akukaze kube semva kwexesha ukuba ungafunda. Ngumcimbi onzima, kodwa njengemoto, akufuneki sazi yonke into malunga nenjini ukuze sifunde ukuyiqhuba ngokukhuselekileyo.
I-intanethi ye-intanethi ayifani neefoto zangaphambili. Iyakuthinta ingqondo ngendlela echanekileyo kwaye engaqondanga. Yenzelwe ngokukhethekileyo ukusebenzisa iindlela zobugcisa zobugcisa obuyinkimbinkimbi ukutshintsha iingcamango zethu nokuziphatha. Ezi zakhono zingenza abasebenzisi banomlutha kwaye baholele ekunyuseni kwizinto ezininzi ezigqithiseleyo zoononophala.
Ezi vidiyo zine zimfutshane zichaza indlela. Baluthatha ngaphandle kwetyala uxanduva ngokuchaza indlela iingqondo ezikholeleka ngayo ekuzonwabiseni okonwabisayo. Oku kusebenza ikakhulu kwingqondo yokufikisa. Umzi-mveliso we-porn eziibhiliyoni ezigidi unomdla kuphela kwingeniso hayi kwiziphumo zengqondo nezomzimba kubasebenzisi.
le eyokuqala Imizuzu emi-5 ubude kwaye ibandakanya udliwanondlebe kunye ne-neurosurgeon malunga nefuthe le-porn.
Lo mzuzu u-2 onobuqili oopopayi Ichaza impembelelo yokungasebenzi kakuhle ngokwesondo kunye nobundilele kulwalamano.
Unjingalwazi uPhilip Zimbardo waseStanford kwezengqondo kwezentlalo ujonge 'ukuvusa umlutha' kule ntetho yemizuzu emi-4 yeTED ebizwa ngokubaUkuditywa kweeGay".
"I-Big Porn"Yintetho ye-TEDx yemizuzu ye-16 ngumbhali wesifundo sesayensi kunye nomlobi uGary Wilson. Iphendula impendulo ebekwe nguZimbardo. Kuye kwagqalwa ngaphezu kweeyure ezili-12.6 kwi-YouTube kwaye iguqulelwe kwiilwimi ze-18.
UGary uhlaziye intetho yeTEDx kwinkcazo ende (1 hr 10 mins) ebizwa ngokuba "Ubuchopho Bakho kwi-Porn- Indlela Iimvumi Ze-Intanethi Zithinta Ubomi Bakho". Kulabo abakhetha incwadi ebandakanyekayo nenolwazi ngamakhulu amabali okubuyisa kunye neengcebiso eziphambili zokuyeka iphonografi bona uGary's Ubuchopho Bakho kwi-Porn: Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neSayensi eVukayo yoLungiso ziyafumaneka kwiphepha, kwi-Kindle okanye njenge-audiobook. Ubeka ezininzi iingcamango eziphambili nakwizinto ezigqwesileyo podcast (I-56 mins).
Kweli candelo 'leziseko zobuchopho', uMvuzo weSiseko kukuthatha kukhenketho lwengqondo yomntu. Ungajonga apha ngeenkcukacha ezithe kratya malunga nesiseko se ngengqondo iveliswe yiYunivesithi yaseMcGill. Ingqondo iguqukile ukusinceda kuphila kwaye kuphumelele. Ukulinganisa malunga ne-1.3kg (phantse i-3lbs), ingqondo yomntu yenza nje i-2% yesisindo somzimba, kodwa isebenzisa malunga ne-20% yamandla ayo.
Ukuze uqonde indlela ubuchopho buguquke ngayo ukuba isebenze ngokubanzi, jonga ukuphuhliswa kwemvelo kwengqondo. Okulandelayo siza kubona ukuba zisebenza njani iinxalenye ngokujonga imigaqo ye neuroplasticity. Yiloo ndlela esiyifunayo kwaye singayifumani imilinganiselo kuquka ukuphuhlisa umlutha. Siza kujonga nendlela ubuchopho bubonisa ngayo ukukhanga, uthando kunye nolwabelana ngesondo neurochemicals. Ukuqonda ukuba kutheni siqhutywa yile mivuzo, kubalulekile ukwazi malunga nenkuthazo yengqondo okanye inkqubo yokuvuza. Kutheni i-golden age of adolescence ixakeka kangaka, iyonwabile kwaye idideka? Fumana okunye malunga ingqondo yobutsha.